Izindlu zaseKayrielaagte zibonisa umqondo jikelele womphakathi nokubambisana phakathi kweNtwana. Izindlu zabo ziyi-microcosms zomphakathi omkhulu futhi zimelela umhlaba wangasese womndeni emphakathini obanzi. Ukufinyeleleka egcekeni lomphakathi (kgoro) ukuya emakhaya ngendlela yomphakathi, ukukhanyela kuzo zonke izindlu ezimbili noma ezintathu. Abesifazane baseNtwana banelungelo lokuhlala emakhaya emva kokuzalwa kwengane yabo yokuqala.
Ezimweni lapho indoda inamakhosi angaphezu kweyodwa (i-Ntwana i-polygynous), izindlu ezimbili noma ezintathu zakhiwe eduze komunye nomunye. Abesifazane baseNtwana bahlobisa izindonga ezinkulu zangaphakathi nezangaphakathi zamagceke ezakha indlu. Epakishwe futhi ehlonywe abesifazane, izindonga zakhiwe umhlaba, umquba kanye netshe elihlangene.
Zihlotshiswe ekupheleni kokuvuna, ekuqaleni kwenkathi eyomile nangesikhathi esiphakathi kokuvuna kwezitshalo nokuhlwanyela komkhiqizo wonyaka ozayo. Ukuhlobisa emzimbeni kungenye yemisebenzi yokuqala eyenziwa ngumakoti omusha, kodwa akuyona nje umsebenzi wokuzimela njengabangane besifazane ngokuvamile ababolekisa isandla. Inhlabathi ebomvu, emhlophe neyomnyama ihlangene (i-limo), esetshenziselwa kokubili ukuhlobisa izindonga futhi isebenze njengesivikelo ngokuthakatha.
Uma lezi zinhlayiya zihlangene, abesifazane badweba izindonga nazo ngokusebenzisa iminwe noma izinti. Ngokungafani nemibukiso yamaNdebele enemibala ngezimpawu zabo ezikhangayo, umhlobiso we-Ntwana umbukiso awuncane, umncane kakhulu futhi u-monochromatic, ohlanganisa amaphethini we-geometric ezintekentekile noma ama-criss-cross motif. Ngenkathi into ehlobisa indlu, izinhlobo zenhlabathi nazo zikholelwa ukuthi zenziwe ngemisebenzi yokwelapha, yokuzivikela noma yokuphulukisa.
Umbala owodwa wombala (obomvu, omhlophe nohlaza okwesibhakabhaka/omnyama) uphindela kuzo zonke izici zenkambiso yezinto zeNtwana, futhi izakhi ezehlukene ezihambisana ngokucabangela noma ezibukeka ngendwangu yombala zisetshenziselwa kakhulu emasikweni nasemibhalweni yansuku zonke. Kodwa-ke, lolo hlathu luqhubekela ngaphesheya komongo wemigomo yokuhamba kanye nemigomo yomphakathi.
Kubonakala ngesambatho sesifazane saseNtwana, emikhondweni yamapuloni angaphambili nangasemuva, kanye nama rosettes agqoke ohlangothini lwezinhloko zabesifazane baseNtwana. Ngaphezu kwalokho, izakhiwo zalo zomhlabathi zisetshenziselwa izindonga zendlu yaseNtswana njengendlela yemilingo, inkolo yezokuvikelwa kokubili okubangelwa yimvelo kanye neyimbangela yamanga.